Apple si iOS bụ akpatre ebe a! Codenamed 'eze', ọhụrụ a sistemụ si Apple ọrụ maka ngwaọrụ dị ka iPhones na iPads na a na-ama ụtọ ịja mma reviews. Mgbe ya iwu unveiling ụbọchị ole na ole azụ, atụnyere ya ụzọ ama malitere na n'ụzọ ziri ezi otú ahụ. Ma, otu ihe na Apple kwesịrị ịnara otuto maka bụ ụzọ otú n'ụzọ dị irè na smartly ọ nọkwa na ihe n'okpuru eyiri banyere ihe na-emepe emepe na 9 version. Ọ bụ ezie na anyị abụghị ndị na ụfọdụ banyere iOS 9 na niile, ma anyị na-mkpịsị aka gafere na-enwe olileanya anyị chọrọ ndepụta ga-egwuri egwu.
The onu akpọ iOS 9
Apple ahapụtụbeghị ka ịtụnanya galore ya loyalists na iOS 9 na-agba akaebe na. A na-esote-emana mobile sistemụ a mara ọkwa na 'Worldwide Developers Conference 2015, ẹkenịmde ke Moscone Center West na San Francisco on 8 June, 2015.
Na iOS 9 karịchaa on 'ọgụgụ isi na pro-n'ọrụ', ọrụ kwesịrị ịbụ aka-na na ole na ole na-emebi àgwà a na-chọrọ ke 7th na 8th nsụgharị. Ya mere, ihe i nwere ike na-atụ anya na-fixes, kwụsie ike, njikarịcha, n'akụkụ aghụghọ imewe Tweaks, mma arụmọrụ, nụchara anụcha atụmatụ na ghara ichefu, ole na ole nkwalite ya.
Top 10 ihe ọhụrụ banyere Apple iOS 9
Nke a bụ nnọọ ihe kasị mkpa mma na iOS 9. A usoro-n'obosara akụkụ na-enye ohere ngwaọrụ matakwuo na onye ọrụ àgwà na-enye na-atụ aro isi na oge, ebe na ọrụ, nke a bụ Apple si Google!
Ịtụnanya ndụ batrị
Ke ọhụrụ mmepe ka Apple ọhụrụ version, nnukwu mma n'ụdị agbatiri ndụ batrị pụtara na ọ dịghị mkpa ka ịgbanwee n'elu ka ụfọdụ ndị ọzọ na ekwentị. N'ihi ya, ọbụna mgbe data ma ọ bụ Bluetooth, Wi-Fi na-nọ na-, na 'ala ike' mode ga-atọ.
Apple akwụ na obere akpa
The Passbook na-asa ụfọdụ ịhụnanya na ọkọkpọhi aha ọhụrụ, obere akpa. Dị nnọọ ka na mbụ, nchekwa nke kaadị na-ebi ebi Agafee na-ekwe nakwa dị ka iguzosi ike n'ihe, ụgwọ ọrụ kaadị, Discover na ọbụna ụlọ ahịa kaadị. Ugbu a, na Apple-akwụ bụ teaming na Square, ọhụrụ contactless kaadị na-agụ nwere ike inwe ike nnabata nke Apple Ṅaa.
Nke a bụ anya mara ọkwa. Ọhụrụ News App bụ akin Flipboard, ma anya ọma. Ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ ike a omenala magazine maka akpali ọdịnaya site na ụfọdụ nke isi na enye dị ka Conde Nast, The New York ugboro na ndị ọzọ, na-a.
iPad gbawara n'etiti ihuenyo multitasking
Ọ bụla na-adịbeghị anya iPad na iOS 9 ga na-akwado multitasking. Dị nnọọ swipe ekpe si ihuenyo n'akụkụ sere elu a SlideOver window. Ị nwere ike iji naanị ihe ngwa na nke ahụ bụ usable. Ma enweta na divider na iPad-aga multitasking mode ikwe gị abụọ usable ngwa ọnụ.
Apple Maps enye ọhụrụ atụmatụ kpọrọ n'ụzọ na ike ga-availed site ole na ole nke obodo ugbu a. Ị nwere ike ịchọta ihe niile si ụgbọ ala, Metro ịzụ ntụziaka na ngwa. Ihe kacha mma bụ na ọ bụ nnọọ mma karịa Google Maps.
Ntọala na a search nhọrọ
N'ikpeazụ ntọala abịa na a smart search nhọrọ! Ị nwere ike itinye akwa onodu-chebaara ngwaọrụ na ya ma si otú na-arụ ọrụ ebube. Ya mere ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ maka a brunch, tụgharịa ịchọ ọnọdụ.
Inwe ihe emelitere Siri pụtara multiple accents na olumba dị ugbu a na i nwere. Ma nke ahụ abụghị niile! Na ọhụrụ interface na miri mwekota, na iOS 9 nwere asụsụ gị na Siri olu kewaa abụọ dị iche iche mmasị.
Chakwasa ihie na-achọ n'ime ngwa
Na 9 version,-atọ ndị ọzọ ngwa 'support pụtara Chakwasa ihie ga-enwe ike chọọ na ngwa aha nakwa dị ka ngwa ọdịnala. Bụghị na ebube?
Best keyboard na iPad
Ikekwe, nke a na-eme ka a na-ekpo ọkụ mmasị n'etiti ọtụtụ. Ọhụrụ QuickType keyboard-enye ohere otu iji ya dị ka a track na mpe mpe akwa site ịtụkwasị abụọ mkpịsị aka na ya na-emekwa ka na-akpali ha gburugburu. Na-eme otú ahụ, ederede ntinye cursor na-ekwe ka-akpali ọ bụla ngwa gburugburu ihuenyo. Ọ bụghị nanị na ọ na-eme ka ndị cursor ọnọdụ mfe ịgbanwe kamakwa ọnwụ sọ ọrụ si tapping ọnọdụ na ihuenyo oge ọ bụla.
E nwere ihe ọzọ na ị ga inyocha Ozugbo iOS 9 ọkọkpọhi nkịtị. Ya mere, na-aga na gị search!
> Resource> iOS> 10 amamiihe atụmatụ ndị ị na Mkpa Ịmata banyere Apple iOS 9